ezemidlalo umkhakha China iyachuma njengoba abatshalizimali sifune izindlela ezintsha ekukhuleni - China Tianjin Shengxin Ezemidlalo Izimpahla
ezemidlalo umkhakha China iyachuma njengoba abatshalizimali sifune izindlela ezintsha ekukhuleni
Fuzhou - Ukugcina umsindo futhi engaguquguquki yentuthuko, amaShayina ezemidlalo umkhakha lezincwadi lalichuma ngo-2016 njengoba abatshalizimali wazama ukufihla ezahlukene ebanzi of ibhizinisi, ngenkathi usafuna izinjini ezintsha ukushayela ukukhula.
umkhakha Yemfihlo ngamakhasimende
UMkhandlu Wombuso China wakhipha idokhumenti ngo-2014 ukuqondisa ukuthuthukiswa kwimboni futhi ukukhuthaza ezemidlalo ukusetshenziswa. Ayikho ifayela 46 iye uthathwa njengoba ingqopha-mlando emlandweni ezimbonini olundizela phezulu.
izinqubomgomo wesifundazwe, esekelwe idokhumenti kazwelonke, wadedelwa ejele ngesikhathi 2015 ezindaweni ezahlukene, futhi izinyathelo eziqondile ezingaphezu Benziwe futhi idolobha kanye County amazinga.
I-General Administration of Ezemidlalo eyanyatheliswa 13 Hlela engu-zezemidlalo umkhakha lokhu Julayi, namanye amadokhumenti satellite ezinye 22 ukusekela uhlelo. Le mibhalo ukuchaza ukuthi imboni yezemidlalo ziyoyidlula 3 trillion yuan ($ 432 billion) ngonyaka ka-2020 Inani Imboni ungeze kulindeleke ukuba hit iphesenti eyodwa-GDP, kanye nemidlalo ukusetshenziswa kulindeleke ukuba hit amaphesenti 2.5 imali alahlwayo lengenako ngaleso sikhathi .
INational Ukufaneleka Uhlelo (2016-2020) kanye okunempilo China Uhlaka (ngonyaka wezi-2030) nazo ekhishwe kulo nyaka ukunikela iziqondiso ezicacile isu likazwelonke kokufaneleka kanye nezempilo izakhamuzi 'futhi abantu abaningi ezemidlalo umkhakha kanye.
UMkhandlu State waveza izinkinga isimo nezimboni ukuqina nokungcebeleka ezemidlalo, ukunikela imiyalelo njengoba imisebenzi esemqoka phambili imihlahlandlela kazwelonke ekhishwe lokhu Okthoba.
Ngaphezu kwalokho, i-General Administration of Sport, ngokuhlanganyela neminye iminyango kazwelonke eziningi zikahulumeni, izinqubomgomo eshicilelwe futhi izinhlelo kulo nyaka kwezemidlalo ebusika, amanzi ezemidlalo, Aero ezemidlalo, sezintaba ezemidlalo ongaphandle kanye neminye imisebenzi.
Lezi zinqubomgomo ezihlobana kwimboni akuzona isibhamu nje ebumnyameni; zingabantu ngesikhathi esifanayo enengqondo, kwenta na lusekelwe. Baye aliveza nebalazwe sokuthuthukiswa kwimboni Chinese eminyakeni ezayo.
Ukumba IP phezulu, imali waya ebanzi
Ngendlela ephawulekayo ezahlukene kusukela emhlabeni wonke ukuthenga tide kwabonakala ngonyaka odlule, ezemidlalo Chinese zimali ezibonakala Baqala ukwenza ngokuqapha ngo-2016 futhi ukufuna indlela engcono yokwenza ibhizinisi.
giant China sika okudayisa Suning Iqembu usezuze esigxotsheni amaphesenti angu-70 e-Italian football club-Inter Milan, into engabiza izigidi ezingu-270-euro ($ 282 million), mhlawumbe ucezu enkulu izindaba oyophuma kwimboni kulo nyaka.
Phakathi naleso sikhathi, nezixhobo ngokuya enkulu enhlokodolobha kuthiwa ukuguquguquka imboni ukugxila ukushayela up inani lemakethe kwezemidlalo kulingwa.
Premiere inkampani yaseChina okuxhumana Tencent usayine isivumelwano ne FIBA, ekubeni umlingani walo phezulu ukuze yiminyaka emakhulu asithoba esilandelayo. Ukubambisana phakathi FIBA ​​futhi Tencent kuyokwenzeka emasimini zokuxhumana, izinkokhelo inthanethi, ukusakazwa ku-inthanethi kanye e-commerce.
Ububanzi UKUBAMBISANA olokhu wanda. Chinese ingcebo giant uWanda Group uye wasungula ngokubambisana okukhethekile nge FIBA ​​okwesikhathi uxhaso emhlabeni wonke, kuhlanganise ukudayiswa amalungelo amalayisense kanye namalungelo ukumaketha global esingashintshi kuze kufinyelelwe esikhathini ezine basketball Umhlaba Cups, ukuba 2033.
Ukubambisana iqhakaza ngezihluthu lwasekhaya kanye. Chinese e-commerce ngokuqinile Ali Ezemidlalo wathatha phezu amalungelo akhethekile TV ye ICUBA (Chinese University Basketball Association). Online inkampani isiqophi Storm Ezemidlalo enwetshiwe ibhizinisi layo zihlanganisa CBA (Chinese Basketball Association) ukusakaza bukhoma. Kulindeleke ukuthi umncintiswano amalungelo CBA sika TV kuyoba ezinzima kakhulu futhi wawushisa e-2017, ngemva CBA ifakwe inkampani yayo kulo nyaka.
Wanda Group ngeke ithimba nabo amaShayina Football Association ukuhlela China umqhudelwano kanobhutshuzwayo weNdebe e-2017, ethembisa ukwenza kube ibhizinisi owaziwa esikhathini esizayo. Khonamanjalo Suning iqembu wenza utshalomali omkhulu ukuthenga amalungelo TV for the English Premiere League, futhi Ti'ao Dongli, wamalungelo i-Chinese Super League (CSL) isungule siqu ukusakaza kwe-TV isikhungo salo.
Ngaphezu ibhizinisi le-IP, ukutshalwa kwezimali ezemidlalo waya ezahlukene ebanzi of izindawo yonkana umkhakha. Ngokusho idokhumenti ucwaningo lezemidlalo kusisa nekufaka timali ngummeli ezimele Ezemidlalo Bank, imali aya izinhlelo zemidlalo ukusebenza, imicimbi yezemidlalo ukumaketha, abezindaba ezemidlalo, sawo esiningi ukuqeqeshwa ngokomzimba kanye nemidlalo ezokuvakasha. Ngemuva kokuwina utshalomali, zokuqala abaningi ibhizinisi ezilwela ekuthuthukiseni nakakhulu ukubhekana nenselelo eziyisisekelo ngokuwina abathengi ngaphezulu.
Zhong Bingshu, uthishanhloko e-Capital University of Sekutivocavoca kanye Ezemidlalo, watshela XINHUA ukuthi imithombo enkulu enhlokodolobha bafisa ukuthola amagama ngokufanayo omkhulu namaqembu ukwakha ubudlelwano, kodwa ubona umfana oneminyaka engu-on-nyaka shift ukuziphatha emakethe.
"A semali dolobha luhlangabezane kwimboni, ikakhulukazi ezindaweni enkundleni yezemidlalo kanye nokusebenzisana amakilabhu abadumile 2015. Lokhu kuthambekela uye ehlile 2016 zimali uthola okunengqondo ngokwengeziwe futhi ucabanga imali. Ngaphezu imicimbi yezemidlalo, kukhona lukhulu ukumaketha okunamandla imfanelo nokungcebeleka ezemidlalo, "Zhong uyalandelwa.
'Ezemidlalo +' umnotho
Cross-umkhakha ukuhlanganiswa ingenye izici ezisobala kakhulu kwimboni Chinese ukuthi uye wanda emakethe emasimini ezokuvakasha, isiko, imfundo, ukunakekelwa ngezokwelashwa kanye nezingosi zokuxhumana nabantu. Ukuthuthukiswa umkhakha obanzi ayisekho sigxile nje izenzakalo ngokwabo; izindawo ezintsha zokukhula ezingaba avulekayo amathuba amasha. Lezi izindlela for cross-umkhakha nokubambisana zaziwa ngokuthi 'ezemidlalo +' amathuba.
Thatha ezemidlalo + ezokuvakasha njengeminye isibonelo esisodwa. abantu abayizigidi ezingu-3.38 babehileleke izenzakalo ezithile 311 ezemidlalo kusuka uJan ukuze ngaMabasa kulomnyaka, izingilazi ingqikithi 11.9 bhiliyoni yuan ($ 1.7 billion) sezimoto, ukuxhumana, amahhotela, catering, kanye namanye amasevisi.
Esemthethweni idatha CSL ebonisa ukuthi ubukhulu izilaleli isilinganiso umdlalo ngamunye kule sizini kwaba 2,000 ezingaphezu kuka ngo-2015 Ngaphezu yokubuka imidlalo baphile, abalandeli abaningi ababuka imidlalo nge-internet. Amathrendi Okufanayo abonakala basketball, volleyball ne table tennis.
I 'ezemidlalo +' ibhizinisi futhi kudingeka banqobe ukwehluleka kwayo kusaqala sokuthuthuka. Izinkampani eziningi ezemidlalo abakwazi ukujabulela izinqubomgomo intela ekhethekile futhi eminye imithetho yendawo neziqondiso iyasilela kakhulu ekuthuthukiseni le mboni.
Ezemidlalo izinhlangano, eziningi zazo eziye engakaze ngilunge futhi wenziwa izitho ezingekho ngaphansi kukahulumeni, abe isandla ababuthakathaka ukudlala ekuthuthukiseni umkhakha. Phakathi naleso sikhathi, yokuntuleka kwengqalasizinda ezemidlalo namanje inkinga enkulu kwamanye amadolobha amaningi.
Ukuya phambili, umkhakha izazi zithi ibhizinisi ezemidlalo, njengoba inkanyezi esanda liphakama umnotho China sika, kudinga isineke ukuziphatha unolwazi nge eziyisisekelo yemakethe esikhundleni ukugembula esiningi dolobha befuna impumelelo esheshayo kanye nezinzuzo osheshayo.
isikhathi Thumela: Jul-26-2018